लक डाउनमा नवपुस्ताः कोही हिप्पीको अनुवाद गर्दै, कोही प्यालेस्टिनी लेखकसँग बात मार्दै | साहित्यपोस्ट
लक डाउनमा नवपुस्ताः कोही हिप्पीको अनुवाद गर्दै, कोही प्यालेस्टिनी लेखकसँग बात मार्दै
समग्रमा भन्नुपर्दा, अधिकांश देशका चलेका लेखकहरूले यस विश्व कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको समयमा त्यस्तो कुनै विशेष लेखनमा काम गरिरहन नसकेको बताउँदै आएका छन् । तर तिनै चलेका लेखकहरूलाई सुनेर, हेरेर अघि बढिरहेको नेपाली साहित्यको काँध, नवपुस्ताचाहिँ लक डाउन के गरेर बिताइरहेको छ त ?
प्रकाशित २ जेष्ठ २०७७ १६:११
देश विगत ५२ दिनदेखि लक डाउनमा छ । लक डाउनका कारण सबै आफ्नै घरमा, कोठामा थुनिएका छन् । कोरोना संक्रमणको अवस्था झन् झन् बिकराल बन्दै गइरहेकै छ । तर यो विशम परिस्तितिमा पनि नेपाली साहित्य निदाइहालेको भने छैन ।
देशका चलेका लेखक तथा साहित्यकारहरूका लक डाउनसँग जोडिएको अनुभव, दृष्टिकोण तथा उनीहरूले गरिरहेका काम र पढिरहका पुस्तकको बारेमा सर्वत्र चर्चा भइरहेको छ । विभिन्न अनलाइन प्याटफममार्फत् उनीहरू पाठक तथा अन्य लेखकहरूसँग जोडिइरहेका पनि छन् । समग्रमा भन्नुपर्दा, अधिकांश देशका चलेका लेखकहरूले यस विश्व कोरोनाले आक्रान्त बनिरहेको समयमा त्यस्तो कुनै विशेष लेखनमा काम गरिरहन नसकेको बताउँदै आएका छन् । तर तिनै चलेका लेखकहरूलाई सुनेर, हेरेर अघि बढिरहेको नेपाली साहित्यको काँध, नवपुस्ताचाहिँ लक डाउन के गरेर बिताइरहेको छ त ?
देश लक डाउनले आक्रान्त बनिरहेका बेला नवपुस्ताका उदयमान साहित्यकारहरू के गर्दै छन् ? उनीहरू लक डाउनलाई कसरी उपलब्धिमूलक बनाइरहेका छन् ? उनीहरूका आवाज पनि अनेक छन् । आज हामी यस स्तम्भमा नवपुस्ताका प्रतिनिधि पात्रहरूका कुरा सुन्छौँ ।
“पाउलो कोएल्होको उपन्यास हिप्पीको नेपाली अनुवाद गर्दैछु”
लकडाउन बसाई काठमाडौँमै भयो । लकडाउनमा एकान्तवास मिल्नेछ, र धेरै सिर्जनात्मक काम गर्न सकिन्छ भन्ने लोभले नै नुवाकोटमा भएका परिवारले आइज भन्दाभन्दै पनि घर गइनँ । डेरामै धुम्धुम्ती बसेको छु भन्दा हुन्छ ।
कोरोना संसारकै लागि शुभसमाचार रहेन । म पहिलो पुस्तकको विमोचन चैतमा गर्ने तयारीमा थिएँ । तर कोरोना महामारी र लक डाउनका कारण विमोचन अनिश्चित बनिदियो । फाइनप्रिन्ट बुक्सले प्रकाशनको जिम्मा लिएको मेरो आत्मपरक आख्यानको पुस्ताकाकार अब लकडाउन खुलेपछि नै आउँछ होला ।
एउटा काम प्रतिकुल समयका कारण अल्झियो भन्दैमा केही नगरी बस्नु भएन । फाइनप्रिन्टबाटै प्रकाशित हुने पाउलो कोएल्होको उपन्या ‘हिप्पी’को नेपाली अनुवाद गर्दैछु । अन्तिम चरणमा छु । जुन लक डाउनको उपलब्धिमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण रह्यो ।
लेखनको कुरा गर्दा पहिलो किताब बजारयात्रा अनिश्चित भए तापनि दोस्रो किताबको पनि लकडाउनको सदुपयोग गर्दै आफैँले सम्पादन सकाएको छु । यो पुस्तक उपन्यास रहने छ । साथै फुटकर लेखहरू पनि लेखेँ, जुन आफ्नै ब्लगहरूमा प्रकाशित गरेँ ।
सामाजिक सञ्जालमा जल्दाबल्दा विषयहरूउपर आफ्ना विचारहरू पनि निरन्तर लेखिरहेको छु । सञ्जालमा लेख्दा सक्दो चोटिलो र रमाइलो शैलीको प्रयोग र विकास गरिरहेको छु । नयाँ नयाँ पाठक, साथीहरू र फलोअर्सहरूसम्म पुग्न यो लकडाउन र सामाजिक सञ्जाल सहायकसिद्ध भएका छन् । यीबाहेक धेरै चलचित्र र सिरिजहरू पनि हेर्न भ्याएँ, जसले लेखन र अनुवादको बीचमा आउने पट्यार र आलस्यता चिर्न मद्दत गरे ।
पठनको कुरा गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा कम पढियो । केवल भारतीय लेखक अमितभा बागचीको “हाफ द नाइट इज गन” भन्ने उपन्यास र नेपालीमा शिवानीसिंह थारूको “काठमाडौँमा एकदिन” गरेर दुई पुस्तकमात्र पढ्न सकेँ । अँ, आफ्ना केही कविताहरूको भिडियो बनाउनुलाई पनि यही लक डाउनको उपलब्धि मान्नु पर्ला !
साहित्यपछिको मेरो रूचि खाने कुरामा छ । त्यसैले लकडाउनमा युट्युब हेरेर केही नयाँ परिकार बनाउन सिकेँ । अब यति गरेपछि लकडाउन पछि घुम्न, डुल्न पाइन्छ भन्ने छ ।
“हामीले बाँचेको समय लकडाउनबाट छिट्टै बाहिर निस्किनेछ, म आशावादी छु ।”
म कोरोनाको विशमतामा आफ्नो लक डाउन अनुभव र यस बिल्कुल खालि समयको उपलब्धि लेख्दै छु । यसर्थ ममा खुसी र दुःख मिश्रित संवेगहरू चलायमान छन् ।
२२ वर्षीय प्यालेस्टिनी लेखक मोन्नद युनस, जसले २ वर्षअघि आत्महत्या गरे, उनको कथा जान्ने रहरमा मैले उनको बारेमा खोजी गरिरहेको थिएँ । केही दिनअघि प्यालेस्टिनी लेखक तथा अनुवादक नाइम अल खातिबसँगको सम्पर्कमा पुगेँ । गाजा क्षेत्रमा बसिरहेका उनी र अन्य प्यालेस्टिनीहरू इजरायल र इजिप्टबीच वर्षैँदेखि लक डाउनमा बस्न बाध्य छन् । “यसरी बाँच्नुपर्दा कस्तो महसुस हुन्छ ?” भन्ने मेरो प्रश्नमा उनले उत्तर थियो– “एउटै अवस्थामा बाँचिरहँदा वर्तमान कहिल्यै असामान्य लाग्दैन । मानिस परिस्थितिसँग अभ्यस्त हुनपुग्छ, र वर्तमानको सही मुल्याङ्कन भविष्यमा मात्र गर्न सकिन्छ ।”
अहिले उनै खातिबलाई सम्झिरहेको छु । ५० दिनसम्म आइपुग्दा घर नै सडक, घर नै खेलमैदान, घर नै कलेज, घर नै क्याफे र घर नै पुस्तकालय बनेको सत्यसँग अभ्यस्त भैसकेको छु । र लकडाउनले घर शब्दको वास्तविक महत्व बुझाएको छ ।
अस्ति औषधि किन्न एक महिनापछि बाहिर निस्किएँ । सडकको दुवै साइडमा उम्रिएको दुवो, हरिया पातहरूले सजिएका रुख, कतैकतै घाम ताप्दै बसिरहेका गाइहरू; आँखा यी सब दृश्य कैद गर्दै डुलिरहेका थिए । सडकमा हिँड्न पाउनु पनि कुनै विशेषाधिकार भएको देखेर आश्चर्य र रमाइलो एकैपटक लाग्यो ।
अतिआवश्यक कामबाहेक बाहिर निक्लिने कुरो छैन । घरै बसेर म केही पुस्तकहरू पढिरहेको छु, र सिनेमाहरू हेरिरहेको छु । पुस्तकका पात्रहरू निष्फिर्की डुलिरहेका छन्, म उनीहरूकै काल्पनिक संसारको अवलोकनमा चित्त बुझाउन बाध्य छु । दिमागमा लेख्नको लागि विभिन्न परिवेश र पात्रहरू घुमिरहेका छन्, तर औँलाहरूले लेख्न भने नसकिरहेको अवस्था छ ।
म आफूलाई यो समयमा विचलित हुन नदिन जीवनशैलीमा केही परिवर्तनहरू गरिरहेको छु । पहिले भेटेर कुराकानी हुने साथीभाइसँग फेसबुक–ट्विटरबाट सम्पर्क कायम गरिरहेको छु । समाचारबाट सक्दो भागिरहेको छु । दैनिक व्यायाम र ध्यानमा आफूलाई खर्चिरहेको छु । भेटेर हुने पुस्तक छलफल जुमबाट गरिरहेको छु । माध्यम र प्रकृया परिवर्तन गरेर सकेसम्म लकडाउन अघिकै जिन्दगी बाँच्ने प्रयास गरिरहेको छु ।
साताका सात पुस्तक: ‘चोभार ब्लुज’देखि ‘प्रेतात्मासँगको…
साहित्यपोस्ट	 १७ असार २०७९ १८:०१
हामीमाझ कोरोनाको सन्त्रास जतिसक्दो छिटो सकियोस् । लकडाउनले मारमा परेका गरिब र असाहयलाई सरकारी र अन्य संयन्त्रबाट उचित सहयोग पुगोस् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले यो समयमा गरिहेको मेहनतले सोचेजस्तो प्रतिफल लिएर आवोस् । अन्य उपाय ननिस्किदाँसम्म हामीसबै घरघरमै बसौँ, र यहाँबाट बाहिर निस्कदाँ मानवजातिले भोगेको यो समयको मुल्याङ्कन गरोस् ।
हामीले बाँचेको समय लकडाउनबाट छिट्टै बाहिर निस्किनेछ । म आशावादी छु ।
“अध्ययन आफैँमा एक धारिलो बौद्धिक हतियार रहेछ”
ग्रिष्म ऋृतुको समय छ । तर मौसम छिनछिनमा बदलिरहन्छ । घाम, कालो बादल, वर्षाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । ममा पनि दिल र दिमागको प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ ।
प्रकृतिले मेरो दिल र दिमागलाई एउटै लयमा कब्जा गरिरहन्छ । प्रकृतिलाई मौसमले बदलिदिन्छ, मलाई पात्रले । लकडाउन घरमै थुनेको पनि लामो समय बितिसक्यो । योबेला बद्लिरहने प्रकृति र मलाई बदल्दिने पुस्तक मेरो निकटका साथी भएका छन् । साहित्य अध्ययनमा रुचि राख्ने भएकाले यो फुर्सदको समय कला तथा साहित्यका पुस्तकहरू र राजनैतिक परिवेशका पुस्तकहरू अध्ययन गरिरहेकी छु । कलेज बन्द छ, कलेजका पुस्तक पनि ।
भर्खरै पढिसकेको पुस्तक कर्नाली ब्लुजको कथा, परिवेश र पात्रलाई बारम्बार स्मरण गर्छु । कर्नाली ब्लुजलाई सन्तानको आँखाबाट अभिभावकको संघर्ष प्रष्टाउने पुस्तकको रुपमा पाएँ । सुदूर तराईको कथादेखि सुदुर पहाडको कथा पढ्दा कथाको परिवेश र भावले सँगै हिँडाइरह्यो ।
मैले अहिले अध्ययन गरिरहेको अर्काे पुस्तक लोकतन्त्र र आजको माक्र्सवाद पनि हो । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको राजनितिक चिन्तनमा लेखिएको उक्त पुस्तक पढिरहँदा मलाई देशको वर्तमान परिस्थितिले झक्झक्याएको छ ।
लक डाउनको फुर्सदिलो समयमा घरको सामान्य कामपछिको समय अध्ययन र लेखनमै बितिरहेको छ । कहिलेकहीँ लेख तथा बुक रिभ्यु लेख्ने गरेकी थिएँ, अहिले भने लेख्न प्रयास नै नगरेका डायरी, कथा, कविता लेखनमा पहिलोपटक प्रयास गरिरहेकी छु । यसर्थ कोरोनाले विश्वसामु अनेकन चुनौति राखिदिएको यो समय मेरो लागि भने लेखन र पठनमा अवसर बनिरहेको छ ।
मैले लकडाउनको सुरुमै पढेको पुस्तक विमान विद्रोह पनि हो । विमान विद्रोह एउटा राजनीतिक अपहरणको बयान हो । जसले नेपालको राजनैतिक दलको र लोकतन्त्रको उदयलाई जोडेको छ । लेखक दुर्गा सुवेदीको व्यक्तिगत भोगाइ समेटिएको यस पुस्तक नेपालको राजनितिक इतिहाससँग जोडिएको छ । लकडाउनकै समयमा मैले न्याय, बेलायततिर बरालिँदा, अनुहारको भीडलगायतका पुस्तक पनि अध्ययन गरँे । प्रायः पुस्तकका घटना, कथा, परिवेशले उही परिवेश, कथा, घटनामा बाँधिरहेझैं लाग्यो । लेखक तानासर्माले लेखेको पुस्तक बेलायततिर बरालिँदामा लेखकका बेलायत यात्राका तितामिठा अनुभुतीहरू छन् ।
प्रकृति र पुस्तकसँग निकट भएर समय बिताइरहन मलाई कति पनि झन्झट लागेको छैन । अध्ययनले अझै नयाँ नयाँ साहित्यिक पुस्तक पढ्ने उत्सुकता जगाएको छ । मैले शब्दका भावमा डुबेर विश्व अवलोकन गरिरहेझैं लाग्छ ।
लक डाउनमा घरभित्रै बसे पनि परिवारबीच रमाइलोसँग समय बिताइरहेको छु । परिवारसँग धेरै नजिक भएको महसुस गरिरहेकी छु । सँगै पढिरहेका साथी यतिबेला मागको नियम पढ्छन, म पात्रको जीवनको नियम पढ्छु । पढ्न मन लागेका अन्य पुस्तक ल्याएर पढ्न नपाए पनि आफूसँग भएका पुस्तकका शब्द–शब्दलाई महसुस गरेर पढिरहेकी छु । यतिबेला प्राकृतिक वातावरणले परिवर्तन नगरेको मेरो मष्तिकलाई पुस्तकका पात्रको भूमिकाले छिनछिनमा परिवर्तन गरिरहन्छन् । त्यसैले, अध्ययन आफैंमा एक धारिलो बौद्धिक हतियार रहेछ ।
आख्यानमा रहर जागेको छ, केही लामा छोटा कथाहरू लेखिरहेको छु
लक डाउन सामान्य नै बितिरहेछ । घरभित्रै बन्दी भएर बसिएको छ । पढ्ने काम पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ । केही कथा संग्रह, उपन्यास पढेँ । तर विशेष गरेरचाहिँ सिनेमा हेरिरहेको छु । विभिन्न विधाका सिनेमाहरू खुब इन्जोय गरिरहेको छु । संसार र जीवनलाई चिह्याउने अनेक आँखिझ्यालहरू सिनेमामा भेट्दा मलाई मजा आउँछ । आफूभन्दा फरक भूगोल, फरक समय, फरक परिवेश र फरक भाषासँग बाँचिरहेका मानिसहरूको जीवनप्रतिको दृष्टिकोण र बुझाइले हैरान बनाइरहेछ ।
भर्खरै कुर्दिश सिनेमा ’टर्टल्स क्यान फ्लाइ’ हेरेँ । पछिल्लो समय युद्धसँग सम्बन्धित सिनेमा अलि बढी हेरिरहेको छु । युद्ध आफैँमा भयनक दर्शन लाग्छ मलाई । युद्ध जीवनको समाप्ति पनि हो, र सुरुवात पनि हो । युद्धले जीवनको भीख पनि माग्छ, र बदलामा जीवन पनि माग्छ । आफैँमा विरोधाभाष लाग्छ मलाई युद्ध ।
“टर्टल्स क्यान फ्लाई’ कुर्दिश वार सिनेमा हो, बेहमान घोबदीको । यो सद्दाम हुसेनको शोषणको समयको कथा हो (इराक अमेरोका युद्ध) । साना तीन जना पात्र छन् । एक १३–१४ वर्षीय बालक, जसको दुवै हात गुमेको छ । अर्की उसकी बहिनी छे, ११ वर्ष जतिको । उनीहरूको परिवार बिस्फोटमा परेर मरेका हुन्छन् । र यी दाजु बहिनी भाग्दै जाँदा बाटोमा अर्को ६ वर्ष जतिको नाबालक फेला पर्छ । शरणार्थी शिविरमा रहेका यिनीहरूमध्ये बहिनी ६ वर्षीय बच्चालाई छाडेर जानुपर्ने अडानमा हुन्छ । तर दाजु मान्दैन । यो बीचमा भोक, अभाव र सानी बच्चीले बारबार छाड्न खोजिरहेको सानो बच्चाको निर्दोषपनले साह्रै नमज्जाले किचिरह्यो । यी केटाकेटीहरूले बाँच्नका लागि गरेको संघर्ष र त्यसबीचमा छचल्किने मानवताले बेस्सरी किच्यो । तीनचार दिनसम्म रनथनिएँ ।
युद्धको बीचमा केटाकेटीले भोगेको दुःख र त्यही दुःखबीचबाट चिहाउने संसार र जीवनले नराम्रोसँग बिथोल्छ । यस्तै अरू सिनेमाले पनि खुब बिथोल्यो । हामी मानवीयता देखाउन मात्र चाहन्छाँै कि साँच्चिकै देखाउँछौ भन्ने कुरा युद्ध सिनेमाले देखाउँछ कि झैँ लाग्छ ।
लेखनको कुरा गर्दा, मैले लेख्ने कविता हो । त्यो लेखिरहेछु । केही छोटा र केही लामा कविताहरू लेखिसकाएँ । आख्यानमा पनि रहर जागेको छ पछिल्लो समय । केही छोटा लामा कथाहरू लेखिरहेको छु ।